Cake Vanilla Cake + Buttercream fudud (Tababar Video ah) - Keega
Cunto qoyan oo Vanilla Cake leh oo fudud oo Buttercream ah
Tani keega vanilj Cuntadani waxay leedahay dhadhan la yaab leh, jilicsan, jajab daruur u eg, oo si aad ah u qoyan. Adoo isticmaalaya burka keegga, habka ureemka beddelka, subagga badan, iyo taabashada saliida ayaa keegaan ku qoynaya maalmo. Iftiin iyo kareem Qaboojinta buttercream taasi waa fududahay in la sameeyo oo aan aad u macaaneyn ayaa tan ka dhigaysa PERFECT karinta keega vaniljka. Hadana hadaad runti rabto inaad ku qanciso asxaabtaada, xitaa waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo ubax qurux badan oo midab leh oo midabkeedu yahay buttercream si loogu qurxiyo!
Ku xiga aniga keega cad ee jilicsan ee jilicsan, iyo keega buluugga ah , keegan vaniljkan waa mid ka mid ah cuntooyinkayaga ugu caansan. Waxaan u isticmaali jiray qashinkan in ka badan toban sano macaamiishayda keega wax aan ka ahayn dib u eegista sharafta leh. Iyada oo la sii daayo my keega qurxinta buugga , Waxaan ogaaday sida keegani runti u noqday mid caan noqday! Kani waa keegga u beddelaya kuwa 'xitaa ma jecli keegga' la-tashiga OMG waxaan u baahanahay inaan kuu ballansanno hadda macaamiisha! Tani waxay kufiican tahay keega arooska, doolshooyinka dhalashada waxayna ka tagi doontaa qof walba oo ku weydiista cuntada.
Waxaa jira TON oo macluumaad ah oo ku jira qoraalkan blog-ka ah waana ogahay inay u muuqan karto wax cabsi leh laakiin waxaan ku dhaaranayaa inaysan ahayn wax qalafsan! Waa wax walboo boqolaal qof ay iweydiiyeen sanadihii la soo dhaafay sidaa darteed waxaan isku dayaa inaan ka jawaabo su'aalo badan oo aan kari karo isla markaana aan damaanad qaado guushaada markii ugu horeysay. Waxaan idhi waa tii ugu fiicnayd ee vanilj keegga ah ee meesha taal markaa aan kuu caddeeyo!
Waxyaabaha ay ka kooban tahay Vanilla Cake
Bur cajiin ah (bur-borotiin-hooseeya) ayaa lagama maarmaan u ah isku-dubaridan. Waxay ka kooban tahay borotiin ka hooseeya daqiiqda oo dhan. Borotiinada hoose waxay lamid tahay horumarka gulinka oo yaraada taas oo keenta jajab jilicsan oo jilicsan. Daqiiqda keega waa waxa aan had iyo jeer ku isticmaali jirnay macmacaanka doolshaha rootida ugu fiican.
Ha ku dhicin 'kaliya ku dar galleyda burka caadiga ah' khiyaanada. Uma shaqeyso qormadan maxaa yeelay waxaan isticmaaleynaa habka kareemka gadaal . Haddii aad isticmaasho bur ujeedo leh, keeggaagu wuxuu u eegi doonaa oo u dhadhamin doonaa sida rootida hadhuudhka.
Haddii aad ku sugan tahay waddan kale, waxaad ka heli kartaa bur keeg laakiin waxay u baahan kartaa in laga dalbado khadka tooska ah. UK gudaheeda, raadi Shipton mills keega iyo daqiiqda cajiinka .
Talo-bixin - Bakeega digaagu wuxuu leeyahay heer borotiin ah 9% ama ka yar markaa raadi burka cayimaya waxa ku jira borotiinka ama weydii weelkaaga bur.
Haddii aad ka heli karto oo keliya burka AP, waxaan kuu soo jeedinayaa tijaabinta tayda karinta keega cad halkii.
Waa maxay Vanilla ugu Fiican?
Sababtoo ah vaniljku waa dhadhanka ugu weyn ee keega vanilj, arrimaha tayada leh. Had iyo jeer waxaan isticmaalaa soosaarida vanilj dhab ah. Waxaan ka helaa Costco maxaa yeelay waa qiimaha ugu fiican. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa digirta vanilj ama dhalada beenta ah ee vanilj haddii aad rabto inaad kala baxdo. Ha ka welwelin soosaarida vaniljiga inay bunni tahay, ma awoodi doontid inaad sheegto mar haddii keega la dubay.
Iskuday inaad ka fogaato dhadhanka faniinka macmalka ah ilaa aad ka hesho mooyee dhadhankaas ay dadka qaar sameeyaan taasna waa caadi! Laakiin tan iyo markii aan ogaaday waxa soo saar vanilj cad ayaa laga sameeyay , Dib uma noqon karo haha. Ok tani run ahaantii run maahan laakiin wali but Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan farqiga u dhexeeya vaniljiga cad iyo kan dabiiciga ah.
Tilmaamaha Guusha (i aamin, waxaad dooneysaa inaad tan aqriso)
Cabir dhammaan maaddooyinkaaga leh miisaan. Dubiddu waa saynis ahaan maxaa yeelay waxaad si kadis ah ugu dari kartaa bur aad u badan ama aadan haysan bur kugu filan markii aad isticmaalayso koobabka, cabir ayaa loo baahan yahay si sax ah. Waxaad ka iibsan kartaa miisaanka jikada ee dariiqa wax lagu dubo ee dukaamada raashinka badankood wax ka yar $ 20.
Keen subagga, caanaha, iyo ukunta heerkulka qolka . Maaddooyinka heerkulka qolka waxay u abuuri doontaa emulsion si sax ah laakiin haddii mid ka mid ah maaddooyinkaagu ay qabow yihiin markaa baytarku si sax ah isuguma qasmi doono waxaadna ku dambayn doontaa lakab qoyan oo ku yaal sagxadda keega. Guji xiriiriyaha kore haddii aad u baahan tahay inaad ogaato sida habboon in loo diiriyo ukumahaaga, caanahaaga, iyo subaggaaga si habboon.
Ha ka baqin inaad isku darto . Haddii aadan waligaa isticmaalin habka kareemka gadaal ka hor intaan lagaa waarin marxaladda isku darka maxaa yeelay waxaan isku qasan doonnaa LABA daqiiqo. Markaad sameysid keeg qaab dhaqameed, weligaa intaas iskuma qasmi doontid maxaa yeelay waxaad iskudhafan laheyd dubida keeggaaga waxaadna abuuri lahayd godad waaweyn (tunnels).
Iyada oo metho kareemka gadaal d, waxaan burka ku darnaa subagga marka hore taas oo runtii ka horjoogsata gluten inay horumarto. Waxaan sidoo kale isticmaaleynaa bur keeg ah oo aan u xoog badneyn sida daqiiqda caadiga ah sidaa darteed waxay u baahan tahay in badan la isku daro. Kareemka gadaal ayaa sidoo kale noo ogolaanaya inaan ku darno cabitaano iyo sonkor badan keegga marka loo eego qaabka isku dhafka caadiga ah taas oo ah sababta keegan vaniljku u yahay mid aad u qoyan oo jilicsan.
Hubi jooggaaga - Haddii aad ku nooshahay wax ka badan 5,000 ft waxaad u baahan kartaa inaad yara yareyso budadaada wax lagu dubo si keegaaga vaniljku uusan u burburin.
Vanilla Cake Tallaabo-tallaabo ah
Tallaabada 1 - Kuleyli foornadaada ilaa 335ºF. Waxaan jecelahay inaan ku dubto heerkul hoose maxaa yeelay waxay keeneysaa keeg macaan laakiin haddii foornadaadu aysan lahayn awooddaas, weli waa caadi in lagu kariyo 350ºF. Waxaa laga yaabaa inaad haysatid qubbad yar ka dib dubista laakiin waad iska yareyn kartaa.
Tallaabada 2 - Cabbirka ugu horreeya ee caanaha (4 oz) ku rid koob kale oo lagu cabbiro. Saliida ku dar oo dhinac iska dhig.
Tallaabada 3 - Qiyaasta labaad ee caanaha, ku dar ukunta iyo soosaarida vanilj. Si tartiib ah u kari si aad ukunta u jebiso.
Tallaabada 4 - Dhig rootigaaga keega, sonkorta, soodhaha, budada dubista, iyo milixda saxanka isku darka miiskaaga oo ku lifaaqan lifaaqa suufka. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa qalabka wax lagu qaso.
* ka hor intaadan weydiinin, kani waa aniga Xiriirinta 'Bosch universal' iyo xiriiriye ku xiran hadaad xiisaynayso inaad waxbadan barato.
Tallaabada 5 - Ku dar subaggaaga jilicsan ee guntimaha adoo isku dardaraya hooseeya. Isku qas wax walba ilaa ay umuuqdaan sida ciid aan dhab ahayn.
Tallaabada 6 - Hadda ku dar caanaha / saliidda isku dar ah isla markiiba oo ku soo bood xawaaraha ilaa 4 (KitchenAid ama xawaaraha 2 ee Bosch) oo isku qas laba daqiiqo oo buuxa si aad u horumariso qaab dhismeedka keega. Dhimashadu waxay noqon doontaa mid khafiif ah, cad, oo aan u muuqan doonin ama jaban.
Tallaabada 7 - Hadda waxaan si tartiib tartiib ah ugu dari doonnaa ukuntayada / isku dhafka caanaha annagoo iskuleyneyno si hoose. Si tartiib tartiib ah ayaan u kordhineynaa maxaa yeelay waxaan ku abuureynaa emulsion ukumo iyo cabitaanno ah taas oo ah sida keegayagu uu u qoyo. Haddii aad dhaqso ugu darto, cabitaannadaadu way ka sooci doonaan subagga waxayna hoos ugu dhaadhici doonaan keegga hoostiisa.
Tallaabada 8 - U qaybi baytariga saddex, 8 ″ x2 ″ digsiyo lagu diyaariyey keega goop ama sii daynta digsiga aad doorbidayso. Caymiska dheeriga ah, waxaad ku ridi kartaa warqad xaraf hoostiisa digsiga laakiin runtii looma baahna. Buuxi weelasha ku saabsan 3/4 ee jidka buuxa. Waxaan u isticmaalaa cabir si aan u hubiyo in dhamaan digsiyadeyda ay leeyihiin qadar isku mid ah maxaa yeelay waxaan ahay qof kaamil ah sida oo kale lol.
Tallaabada 9 - Keega keega u kari ilaa 25-30 daqiiqo ilaa bartanka la dejinayo oo caday ka soo baxayo isagoo nadiif ah. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato waqti dheeri ah sidaa darteed ha ka baqin inaad keega dubatid muddo dheer.
Tallaabada 10 - Keega ka fogee foornada oo dhig dhig qaboojiyaha qaboojiyaha. U daa in ay qaboojiyaan illaa ay weelku si dirqi ah u kululaanayaan. Ha u oggolaan inay qaboobaan haddii kale way ku dhegi doonaan.
Tallaabada 11 - Keega ka dib markay qabow yihiin, ku soo tuur sagxadda qaboojiyaha si aad si buuxda u qaboojiso. Kadibna waxaan ku duuduubaa caag balaastik ah, ku rid qaboojiyaha ama qaboojiyaha 30 daqiiqo si keega u adkeeyo sidaa darteed way fududahay in la maareeyo ka hor inta aanan dhaxan. Sidoo kale waad barafoobi kartaa keegaga haddii aadan qorsheyneynin inaad si dhaqso leh u barafeeysid.
Sida Loo Sameeyo Buttercream fudud
Haddii aad aqoon u leedahay qurxinta keega, xor u noqo inaad ka booddo qaybtan laakiin in badan oo idinka mid ahi waxay i weydiisteen inaan si qoto dheer ugu sii dheeraado sida aan u dhaxamo oo aan u buuxiyo keega keega markaa taasi waa waxa aan uga gudbi doono qaybtan.
In kasta oo keegaggu qaboojinayo, hadda waa wakhti ku habboon in la sameeyo subag macaan . Waan jeclahay sameynta subagga fudud maxaa yeelay si deg deg ah ayey isugu timaaddaa dhadhankeeduna waa sida oo kale swiss meringue buttercream laakiin dhakhso badan.
Tallaabada 1 - Ku dar ukuntaada cad ee la kariyey iyo sonkorta budada ah weelka dhajiskaaga istaaga oo lifaaqa ku lifaaqan. Ku fiiq kor sare hal daqiiqo si sonkorta u milmayso.
Tallaabada 2 - Ku dar subaggaaga jilicsan qaybo yar yar adoo isku darsamaya hoos illaa inta laga wada darayo.
Tallaabada 3 - Ku dar faniinkaaga iyo milixda. Kordhi xawaaraha wax lagu qaso oo ku karbaasho kor ilaa iyo inta subaggu ka fudud yahay oo kariim yahay. Dhadhan sii. Haddii ay weli dhadhamayso sida subagga, sii wad karbaashka. Waa inuu dhadhamiyaa sida jalaatada macaan.
Haddii subagaaga subaggu uu ku dhegan yahay dhinacyada baaquli oo aanad karbaashin, subaggaagu wuxuu noqon karaa mid aad u qabow. Soo saar 1 koob oo ah buttercream kuna dhalaali microwave-ka illaa ay si dhib yar u dhalaasho.
Kudar buttercream-ga dhalaalay ku dar buttercream qabow oo sii wad karbaasha ilaa ay ka khafiifeyso oo qalafsan tahay. Tani waxay qaadan kartaa ilaa 15-20 daqiiqo sidaa darteed hadda waxay noqon laheyd waqti fiican oo aad ku dhaqdo suxuuntaada
Ikhtiyaari ah: U beddel suufka oo u oggolow subagaaga subagluu inuu isku qaso wax yar 10 daqiiqo si aad uga saarto wixii goobooyin dheeri ah si aad u yeelato subag aad u quruxsan oo jilicsan. Waxa kale oo aad ku dari kartaa xoogaa midabaynta cuntada cad ama dhibic yar oo ah midabaynta cuntada midabbada leh si aad u iftiimiso subagaaga subagga si aad ugu muuqato mid dhab ah caddaan.
Sida Loogu Qurxiyo Cake Vanilla Talaabo-tallaabo
Waxaan ku qurxin doonaa keega vaniljayga oo leh ubaxyo qurux badan oo buttercream ah iyadoo la adeegsanayo farsamo mindi midab leh. Haddii aadan haysan mindi palette waxaad qurxin kartaa keegga sida aad jeceshahay. Ila daawo aniga sida loo qurxiyo keegaaga ugu horeeya fiidiyowga fikrado dheeri ah waxaanan sidoo kale dhaafayaa aaladaha caadiga ah ee aan ugu isticmaalo qurxinta keegga.
Tallaabada 1 - Ka jar digaagga keegaaga si ay isugu fiicnaadaan oo u siman yihiin. Waxaan u isticmaalaa mindi rooti ah si aan tan u sameeyo.
Ikhtiyaar : ka jar geesaha bunni ah si marka aad u jeexdo keegaaga, aad u aragto wax aan ahayn keega cad oo saafi ah. Tani waa wax aan badanaa u sameeyo keega arooska halka ay u egtahay arrinta.
Tallaabada 2 - Lakabkaaga ugu horreeya ee keega dhig dusha 6 ″ keeg ama si toos ah saxanka keega u dhig.
Tallaabada 3 - Ku faafi lakabka buttercream dusha dabka, waxaan ku toogtaa qiyaastii 1/4 ″ qaro weyn. Isku day inaad ka dhigto mid isku mid ah spatula-kaaga.
Tallaabada 4 - Kudar lakabkaaga xiga ee keega oo ku soo celi geedi socodka buttercream kuna dhammee lakabka sare ee keega.
Tallaabada 5 - Ku faafi lakab khafiif ah oo subag ah dhammaan keega. Tan waxaa loo yaqaan jaakad jajaban waxayna kudhagtaa jajabka si aysan u galin lakabkaaga keega ugu dambeeya. Keeggaaga dhig qaboojiyaha ama qaboojiyaha illaa 15 daqiiqo illaa iyo inta buttercream uu ku adkeysanayo taabashada.
strawberry fudfudud oo fudud oo la isku daray cake
Tallaabada 6 - Kudar lakabkaaga labaad ee buttercream. Waxaan ku bilaabayaa xagga sare oo waxaan ku fidinayaa sagxadda si siman. Ka dib waxaan ku darayaa buttercream dhinacyada oo waxaan ku wada hagaajiyaa mashiinka keydka. Fiiri fiidiyaha hoose si aad u hesho tilmaamo qoto dheer oo ku saabsan qaboojiyaha keega. Keeggaaga dib ugu celi qaboojiyaha illaa 15 daqiiqo illaa iyo inta ay subagdu ka adkaanayaan. Ama waad uga tagi kartaa keegaaga qaboojiyaha habeenki hadii aad rabto inaad qurxiso maalinta xigta.
Tallaabada 7 - Midabee subagaaga. Waxaan midabeeyay qiyaastii 1/4 koob oo midab kasta, iftiin, iyo casaan dhexdhexaad ah anigoo adeegsanaya midabaynta midabkeedu yahay midab koronto casaan leh.
Tallaabada 8 - U adeegso midiyahaaga palette-ga ah si aad u sameysid ubaxyadaaga buttercream (u fiirso fiidiyaha faahfaahin dheeraad ah). Waxaan kaloo kudarsaday xoogaa saydhis ah oo cad halkaan iyo halkaan si loogudaro.
ku shub salka mindida midabka leh xoogaa subag casaan madow ah
xoq dhinacyada dhinacyada mindi palette saxanka si aad uga saarto xad-dhaafka
ku riix mindi palette dusha dusha keegga
dib u jiid si aad u sameysid taranka
ku celi hawshan oo samee ubax 5 ama 6 ah
Ku dheji xayawaan dheeri ah dusha sare leh subagga casaanka fudud
ku dar xoogaa buttercream bartanka ubaxa
kala duwanaanta tirada ubaxyada ku wareegsan keega
Halkaasna waad ku haysataa! A keega vaniljka qoyan oo macaan taasi sidoo kale waxay u egtahay qurux! Waxaan had iyo jeer keegayaga ku hayaa qaboojiyaha illaa aan diyaar u ahay inaan u adeego ama haddii ay tahay inaan keeno laakiin keegag qabow ayaa dhadhamin kara qalalan. Hubso inaad keeggaaga kala soo baxdid qaboojiyaha dhowr saacadood ka hor intaadan qorshaynayn cunista. Saliida subagga fudud waxay ku jiri kartaa heerkulka qolka 24 saac sidaa darteed wax walwal ah kama qabin inay xumaato.
Miyaad U Adeegsan Kartaa Cunnadan Cake Vanilla Cake Cupcakes?
Cuntadani waxaa loo qaabeeyey in lagu dubto si fiican oo siman sidaa darteed ma ahan tan ugu fiican fekerkeyga ku saabsan koobabka. Haddii aad runtii rabto inaad u isticmaasho keega, iskuday kan karinta koobabka vanilj halkii.
Haddii aad runtii rabto inaad isticmaasho cuntadan, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso xoogaa hagaajin ah.
Iska yaree dareeraha ku jira qashinka kala badh oo saliidda oo dhan ka tag.
Waxaad ku karisaa 400º F illaa 5 daqiiqo ka dibna hoos u dhig heerkulka 335º F 10 daqiiqo oo dheeri ah ama ilaa cadayga uu ka soo baxayo isagoo nadiif ah. Kuleylka dheeraadka ah ee bilowga ah wuxuu ka caawin doonaa qubbada koob-ka-koobku inuu kor u kaco oo uu xiriir adag la yeesho duubaha keega.
Ha ka buuxin safka koobabka keega in ka badan 2/3 ee jidka oo buuxa ama way buuxsami doonaan oo si siman ayay u fuulayaan.
Cuntadani waxay sameysay 36 koob oo keeg ah.
Miyaad Ku Dabooli Kartaa Cake Vanilla Fondant?
Jawaabtu waa haa! Waad ku daboolan kartaa keeggan gudaha jacayl ilaa iyo intaadan ku dhaxanaynin farmaajo jiir barafow. Qaboojiyaha farmaajadu sifiican ugama fiicnaado agtaada, waxay ka dhigtaa oohin iyo inuu qoyaan yeesho. Ka dib markii keegaaga la qaboojiyo oo lagu qaboojiyo lakabka ugu dambeeya ee buttercream waad awoodi kartaa ku dabool fondant.
Keega Berry Chantilly
Bakeega Cake Buuxinta
Sida loo sameeyo keegga ugu fiican ee vaniljka ee leh habka kareemada celisa. Qoyan, muuqaal jilicsan iyo dhadhan lama ilaawaan ah. Waqtiga Diyaarinta:shan iyo toban daqiiqado Waqtiga karinta:30 daqiiqado Wadarta Waqtiga:Afar. Shan daqiiqado Kalori:445kcal
Recipe Cake Vanilla
▢4 ounces (113 g) caano dhan in lagu qaso saliida
▢3 ounces (85 g) canola saliidda
▢6 ounces (170 g) caano dhan in lagu qaso ukunta
▢1 qaado (1 qaado) soosaarida vanilj ama 1 xabo digirta beenta ah
▢3 weyn (3 weyn) ukunta heerkulka qolka
▢13 ounces (368 g) bur keeg
▢13 ounces (368 g) sonkorta granulated
▢3 qaaddo (14 g) budada dubista
▢1/4 qaaddo shaaha (1/4 qaaddo shaaha) Fixiso
▢1/2 qaaddo shaaha (1/2 qaaddo shaaha) cusbo
▢8 ounces (227 g) subag aan cusbo lahayn jilicsan heerkulka qolka laakiin aan dhalaalin
Qaboojiyaha fudud ee Buttercream
▢16 ounces (454 g) sonkorta budada ah
▢4 ounces (113 g) ukunta la kariyey
▢laba qaaddo (laba qaaddo) soosaarida vanilj
▢16 ounces (454 g) subag aan cusbo lahayn jilicsan heerkulka qolka laakiin aan dhalaalin
▢1/4 qaaddo shaaha (1/4 qaaddo shaaha) cusbo
▢1 TINY dhibic (1 hoos u dhac) midabaynta cuntada guduudan si aad u dheellitirto midabka jaallaha ah (ikhtiyaar)
▢3 dhibco midabaynta casaan koronto leh ubaxyada
▢1 Miisaska cuntada rusheeyo cad qurxinta
▢8 'x 2' Cake Canjeero (3)
MUHIIM AH : Kani waa kan ugu fiican ee vanilj keega ah maxaa yeelay waxaan isticmaalaa cabir sidaas ayeyna ku soo baxdaa si hagaagsan Haddii aad u beddesho koobabka ma ballan qaadi karo natiijooyin wanaagsan. Hubso in dhammaan (waxyaabaha qabow) subagga, ukunta, caanuhu ay yihiin heerkulka qolka ama in yar oo diiran. Eeg qoraalkayga ku saabsan sida loo isticmaalo miisaanka haddii aadan aqoon sida loo cabiro culeyska.
Foornada kuleylka illaa 335º F / 168º C. Diyaarso seddex dherer 8'x2 'keeg ah oo leh keeg goos ah ama sii daayo digsi kale oo la doorbido.
4 oz oo caano ah ku rid koob kale oo lagu cabbiro. Saliida ku dar caanaha oo dhinac dhig.
6 oz ee haray ee caanaha ah, ku dar vanilj iyo ukunta heerkulka qolka. Si tartiib ah u laadi si aad isugu darto. Dhinac iska dhig.
Dhig burka, sonkorta, budada dubista, soodhaha, iyo milixda saxanka isku darka miiskaaga oo ku lifaaqan lifaaqa suufka.
Mashiinka ku wareeji xawaaraha ugu hooseeya. Si tartiib ah ugu dar qaybo yar oo subaggaaga jilicsan illaa inta laga wada dhigayo ka dibna wax walboo ha isku darsamaan illaa ay u eg yihiin ciid aan dhab ahayn.
Ku dar caanahaaga / saliidaada isku dar ah hal mar walxaha qallalan iskuna qas dhexdhexaadka (xawaaraha 4 ee kitchenaid, xawaaraha 2 ee Bosch) 2 daqiiqo oo buuxa si aad u horumariso qaab dhismeedka. Calan saacad! Ha welwelin, tani kama badin doonto keegga.
2 daqiiqo kadib, xoqo baaquli. Tani waa tallaabo muhiim ah. Haddii aad ka booddo, waxaad ku dhex yeelan doontaa buro adag oo bur ah iyo waxyaabo aan isku qasanaynin oo ku jira budadaada. Hadaad goor dambe sameyso, si buuxda isuguma qasmi doonaan.
Si tartiib ah ugu dar caanaha / ukunta isku dar ah adoo isku qasanaaya, joojinaya inaad weelka ku xoqdo hal mar oo dheeri ah nuska. Isku qas ilaa inta la isku darayo. Foornadaadu waa inay ahaataa mid qaro weyn oo aan diirranayn.
U kala qaad baytariyadaada keega dufanka badan oo buuxi 3/4 ee wadada. Waxaan jeclahay inaan miisaamo weelkeyga si aan u hubiyo inay xitaa yihiin.
Dub ilaa 30 daqiiqo oo hubi keegaaga. Samee 'tijaabada la sameeyay'. Gali caday si aad u ogaato inuu nadiif ku soo baxay iyo in kale. Marmarka qaarkood baytari qoyan ma soo muuqdo ee hubi inuu nadiif yahay oo aanu qoyan uun. Kadib si tartiib ah u taabato dusha keegga, miyuu soo noqdaa? Heerkulka foornada wuu kala duwanaan karaa sidaa darteed haddii aan weli la sameyn, dub ilaa dhowr daqiiqadood oo dheeri ah (2-3) oo mar kale hubi ilaa uu ka gudbo imtixaanka 'dhammaaday'.
Keega ka fogee foornada oo waxaad siisaa qasabad miiska dushiisa si aad hawada u sii deyso ugana hortagto yaraansho badan. U oggolow inay ku qaboojiyaan sariirta qaboojiyaha illaa ay si diirran u kululaanayaan.
Ka dib markii aad qaboojiso ilaa 10 daqiiqo, saar sariirta qaboojiyaha dusha dusha keegga, adigoo mid ka mid ah gacanta saaraya meesha qaboojiyaha qaboojiyaha ah iyo hal gacan oo ka hooseysa digsiga oo ku dhaji digsiga iyo sagxadda qaboojinta sidaas darteed digsiga ayaa hadda foorara sariirta qaboojinta. Digsiga si taxaddar leh uga saar. Ku celi digsiga kale.
Ka dib marka keega si buuxda loo qaboojiyo, si taxaddar leh ugu duub baakadaha balaastigga ah oo dhig dhig qaboojiyaha ama qaboojiyaha ilaa 30 daqiiqo si loo adkeeyo keegga loona fududeeyo la qabsiga duubista.
Ku rid ukunta cad iyo sonkorta budada ah baaquli fiicni dhalada. Kusoo lifaaq buskudka, isku dar maaddooyinka si hoose ka dibna kor ugu karbaash 5 daqiiqo. Ku dar soosaarida vanilj iyo milix.
Ku dar subaggaaga jilicsan ee jajabyada ah kuna karbaash lifaaqa isku dhafka si aad isugu darto. Waxay u ekaan doontaa curd markii hore. Tani waa caadi. Waxay sidoo kale u muuqan doontaa jaalle quruxsan. Karbaash sii wad.
Ku karbaal dusha sare 8-10 daqiiqadood illaa ay ka caddaanayso, fudeyd iyo dhalaal ka muuqato. Haddii aadan karbaash kugu filan, waxay ku dambayn kartaa dhadhamin subag.
Ikhtiyaari ah: Haddii aad rabto baraf cad, ku dar dhibic yar oo guduud ah si aad uga hortagto jaallaha ku jira subagga (in badan oo badan ayaa ka dhigaya qabowgu inuu noqdo mid cirro leh ama midab khafiif ah.)
Ikhtiyaari ah: U beddelo lifaaqa suufka oo isku qas qun yar illaa 15-20 daqiiqadood si aad u sameysid subagga qulqulaya oo aad uga saarto goobooyin hawo ah. Tan looma baahna laakiin haddii aad dhab ahaantii rabto dhalaal qabow, ma rabto inaad ka boodo.
Ka dib markii keegaaga la qaboojiyo, ka buuxi qabowga aad ugu jeceshahay iyo barafka banaanka. Haddii aadan aqoon u lahayn qurxinta keega, iska hubi sida loo sameeyo qoraalkaaga ugu horreeya ee keega! U fiirso fiidiyaha si aad u aragto sida aan u sameeyay ubax midabkeedu yahay ubax buttercream.
Culeys saar maaddooyinkaaga si aad uga fogaato in keega uu xumaado. Isticmaalidda miisaanka jikada ee dubista waa mid fudud oo wuxuu ku siinayaa natiijooyinka ugu fiican mar kasta.
Hubso in walxahaaga qabow oo dhami ay yihiin heerkulka qolka ama inyar oo diiran (subag, caano, ukumo, si loo abuuro dufaan isku dhafan. Dufanka la shiilay ayaa sababa keega inuu dumo.)
Waa inaad u isticmaashaa burka keegga qaababkan. Ha u dhicin 'kaliya ku dar galleyda si bur caadi ah'. Uma shaqeynayo qashinkan. Keegaagu wuxuu u ekaan doonaa oo u dhadhamin doonaa sida rootida hadhuudhka. Haddii aadan heli karin burka keega, isticmaal burka cajiinka oo aan u jilicsanayn sida kan keega laakiin waa ka fiican yahay ujeeddada oo dhan.
Haddii aad ku sugan tahay Boqortooyada Midowday raadso Shipton mills keega iyo daqiiqda cajiinka . Haddii aad ku sugan tahay qayb kale oo dalka ka mid ah, raadi burka rootiga borotiinka hooseeya.
Markaad sameysid habka kareemka beddelka, waxaad ku dabooleysaa burka subagga oo waxaad ka joojineysaa gluten inuu horumariyo. Tani waxay abuurtaa keeg aad u qoyan oo jilicsan. Markaad ku darto caanaha iyo saliida, waa inaad isku qastaa 2 daqiiqo oo buuxa si aad u horumariso gluten-kan. Tani waxay abuurtaa qaabdhismeedka keega. Haddii aadan isku darin 2da daqiiqo ee buuxa, keeggaaga wuu burburi karaa.
Samee sii daayahaaga digsi ( keega goop !) Siidaynta digsigii ugu fiicnaa abid!
Ma u baahan tahay caawimaad dheeraad ah oo ku saabsan samaynta keegaaga ugu horreeya? Iska hubi my sida loo qurxiyo keegaaga ugu horeeya boostada blog.
U adeegida:1adeegaya|Kalori:445kcal(22%)|Kaarboohaydraytyada:46g(shan iyo toban%)|Protein:4g(8%)|Dufan:28g(43%)|Dufan Dufan:18g(90%)|Kalastarol:88mg(29%)|Sodium:113mg(5%)|Kaliumperyamper:98mg(3%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:35g(39%)|Vitamin A:807IU(16%)|Kaalshiyam:48mg(5%)|Bir:1mg(6%)
cuntooyinka cookie -ka fudud ee carruurta kirismaska
sophie turner maisie williams isaac hempstead-wright
Cuntada keegga ee aan lahayn gluten iyo sonkor